डिशहोमको रमाइलो टेलिभिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो “भ्वाइस अफ नेपाल” – Pahilo Page
डिशहोमको रमाइलो टेलिभिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो “भ्वाइस अफ नेपाल”
काठमाडौं, १८ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो “भ्वाइस अफ नेपाल”लाई नेपाली दर्शकहरुले डिशहोमको “रमाइलो टिभी”मा हेर्न पाउने भएका छन् ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शोहरुको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा दर्शकहरुको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै रमाइलो टिभिमा नेदरल्याण्डको बहुचर्चित गायन रियालिटि शो The Voice को नेपाली संस्करण “Voice of Nepal” (Franchise program of Netherland) प्रसारण हुने भएको हो ।
डिशहोमले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलहरुका साथै आफैले प्रवद्र्धन गरेका च्यानलहरु प्रशारण गरिरहेको छ । डिशहोम आफैले प्रवद्र्धन गरेका च्यानलहरुमध्य पनि रमाइलो टिभिले दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएको छ । रमाइलो टिभिमा नेपाली हाँस्य श्रृंखला, नेपालीमा अनुवाद गरिएका चर्चित हिन्दी टेलिश्रृंखला, साङ्गीतिक कार्यक्रम, जीवनकथा लगायत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरु प्रसारण भइरहेका छन् । रमाइलो टिभि High Definition मा प्रसारण हुने गर्दछ ।
साउनको पहिलो हप्तादेखि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको प्रथम संस्करणमा ३० भागसम्म दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिने छ । यस कार्यक्रम रमाइलो टिभिमार्फत प्रसारण गरिनेछ भने ए.डि रिलिज प्रालिसँग डिशहोमले कार्यक्रम प्रायोजनको सम्झौता समेत गरेको छ ।
स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नेपालको एकमात्र डि.टि.एच. सेवा प्रदायक डिशहोमले नेपालमा रहेका ग्राहकहरुमाझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शहर बजारदेखि ग्रामीण भेगमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो रोजाई अनुसारको एच.डी. तथा एस.डी. प्याकेजहरु प्रदान गर्ने यो कम्पनी नेपालको भौगोलिक बनावटमा उपयुक्त रहेको हुनाले जुनसुकै ठाउँमा पनि सहजै जडान गर्न सकिन्छ । साथै नेपाल सरकारको अनिवार्य डिजिटलाइजेसन नीतिले गर्दा पनि डिजिटल टिभि सेवामा डिशहोम ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईमा परेको छ ।
प्रकाशित मिति : शुक्रवार, जेठ १८, २०७५ समय : २:३४:२४ 144 पटक पढिएको